Blogs | Mahesh Pathak - Opinion of Mahesh Pathak
Blogs | Mahesh Pathak
Opinion of Mahesh Pathak
October 4, 2016campaign, Uncategorizedadminmpwp	यो प्रश्नको उत्तर पाउन पहिले तपाइँ आफैले आफैसँग यी प्रश्नहरुको जवाफ खोज्नु पर्छ।
Leaveacomment	हेटौंडाका इ-रिक्सा चालक मनोज साहको जीवन कथा August 30, 2016Inspirational Stories, Uncategorizedछोरीलाई पढाउने बाबु, जिम्मेवार अभिभावकadminmpwp	मनोज साह, उहाँको इ-रिक्सामा
Leaveacomment	अन्तर-व्यक्ती संबन्ध राम्रो बनाउने विवेकशील मन्त्र – समानुभुती
August 23, 2016Bibeksheel Mantra, Uncategorizedसमानुभुतीadminmpwp	कुण्ड-कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड बिचार भनेझै सामाजिक जीवनमा व्यक्ती-व्यक्तीका बिचारमा भिन्नता देखिनु स्वभाविक हो। हरेक मान्छेको जिन (gene) र सामाजिकिकरण अलग-अलग हुने भएकोले बिचारको विविधता अवश्य हुन्छ। विविध परिस्थितिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विविधता अवश्य हुन्छ। यसरी, बिचार अलग हुँदा, कार्य पनि अलग हुन्छन र एकले गरेको कार्य अर्कोलाई मन नपर्न सक्छ। यसैले गर्दा कहिलेकाँही गम्भिर अन्तर-द्वन्द सिर्जना हुन्छ।
Leaveacomment	समानुभुती – एक विवेकशील मन्त्र
August 19, 2016Bibeksheel Mantra, Uncategorizedविवेकशील मन्त्र, समानुभुतीadminmpwp	विवेकशील नेपाली भन्नु र बन्नुमा फरक छ। तपाई विवेकशील बन्न तपाईले विवेकशील मन्त्रहरुलाई आत्मसात गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ। विवेकशील मन्त्रहरु: निष्ठा, पारदर्शिता, उत्कृष्टता, साहस, विनम्रता र समानुभुतीलाई।
Leaveacomment	के रिचार्ज कार्ड नङले कोर्दा क्यान्सर हुन्छ?
August 17, 2016Interesting facts, Uncategorizedadminmpwp	रिचार्ज कार्ड नङले कोर्दा क्यान्सर हुन्छ भन्ने हल्ला तपाईले पनि पक्कै सुन्नुभएको होला। रिचार्ज कार्डमा सिल्भर नाइट्रो अक्साइड नामक रसायन हुने र यसले छालाको क्यान्सर हुन्छ भन्ने हल्लाले गर्दा नै सिक्काको प्रयोग गर्नेहरु धेरै छन्। के हो त यथार्थ? मैले यस संबन्धमा गुगलमा सर्च गर्दा यस्तो तथ्य थाहा पाएँ।
Leaveacomment	जोया प्रती जुन भाव जागेको छ, सबै विदेशी पाहुना प्रती जागोस
August 17, 2016Tourism, Uncategorizedजोया, नेपाली पर्यटन क्षेत्रadminmpwp	फिलिपिनो महिला जोयाले नेपाली श्रीमानको कारण नेपालमा पाएको दु:खको बारेमा समाचार पढेपछी सबैमा संवेदनशीलता जागेको छ। एक विदेशी महिलाले नेपालमा यस्तो दु:ख पाउँदा ३ करोड नेपाली कै बेइज्जत भएको महशुस गरेका छौं। जोया नेपालकी बुहारी हुन्, उनले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने बिचार धेरैमा छ। म यी सबै भावनाहरुलाई सम्मान गर्छु।
Leaveacomment	BibekSheel Nepali Professional Help Desk सँगको अनुभव
August 16, 2016Entrepreneurship, Uncategorizedhelp desk, professionaladminmpwp	हालसालैको कुरा हो, कम्पनी दर्ता गर्न मलाई जरुरी document बनाउन professional सहयोग चाहिएको थियो। र कोबाट कसरी सहयोग पाउने भन्नेमा अलमल्ल थिएँ।
Leaveacomment	२०२० सम्ममा काठमाडौं-केरुङ रेलमार्ग बनाउन हामी सबै जुटौं
August 15, 2016Development, UncategorizedSigatse- Kathmandu Railway, सिकाग्से काठमाडौ रेलमार्गadminmpwp	चिनसँग भएको रेलमार्ग तथा कनेक्टिभिटी विस्तार संबन्धी संझौता अनुसार चिनले तिब्बतको दोस्रो ठुलो सहर सिगात्सेसम्म जोडेको रेलमार्गलाई सन २०२० सम्ममा केरुङ नाकासम्म जोड्ने निति लिएको छ। हालसालै भएको प्राविधिक अध्ययनले सिगात्से-काठमाडौ रेलमार्गमा १०० किलोमिटर प्रती घण्टाको गतीमा रेल कुद्न सक्ने देखाएको छ। चिनले आफ्नो काम गर्नेछ नै। अबको महत्वपूर्ण कुरा नेपालको तर्फबाट गर्नु पर्ने काम अर्थात काठमाडौ-केरुङ रेलमार्ग २०२० सम्ममा तयार पार्न हामी तत्पर छौं त भन्ने हो।
Leaveacomment	म संसदीय सर्वोच्चता सहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा छु
August 14, 2016Politics, Uncategorizedadminmpwp	म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय स्वरुपको पक्षमा छु। र यसको साथै संसदीय सर्वोच्चता प्रतिको मेरो आश्था पनि मजबुत छ। यस संबन्धमा मेरो स्पष्ट धारणा यस प्रकार छ:
Recent Posts	म त एक आम नेपाली मलाई के फाइदा डा. केसीको अनशनले?
हेटौंडाका इ-रिक्सा चालक मनोज साहको जीवन कथा अन्तर-व्यक्ती संबन्ध राम्रो बनाउने विवेकशील मन्त्र – समानुभुती
Categories	Bibeksheel Mantra